Chrome: Ihe na-atọ ụtọ karịa na Nchọgharị Nchọgharị | Martech Zone
Otu ihe na-amasị m mgbe niile bụ ịmegharị nchọgharị ndabara ma ọ bụ ndepụta nke injin - n'agbanyeghị ma ọ bụ Firefox ma ọ bụ safari. M na-enyocha saịtị nke m oge niile m na-agbakwunye na listi ahụ. Na mgbakwunye, ọ na-atọ ụtọ mgbe niile ịme ihe dịka ịme Bing nyocha ọchụchọ gị na Chrome iji mee ka nnukwu anụ ahụ na-alụ ọgụ (I.) na-amasị Bing!).
Ọbụna m wuru nke m Tinye ụdị njin ọchụchọ maka Firefox iji mee ka ihe dị mfe. Chrome adịchaghị mfe, ọ naghị eji ihe mgbakwunye AddEngine nke Firefox na-eme ka ị nweghị ike wulite njikọ. Nakwa, enweghị nkwụsị ọ bụla maka ịhọrọ igwe nchọta ihe.
Agbanyeghị, enwere otu atụmatụ dị egwu yana omnibar… ị nwere ike itinye isiokwu nke ịhọrọ iji gbakwunye njin ọchụchọ. Nke a bụ otu esi tinye igwe nyocha:
Ma ọ bụ gaa na Mmasị Chrome wee pịa jikwaa na Nchọgharị Nchọgharị ma ọ bụ pịa nri na Omnibar ma họrọ Dezie Injin Nchọgharị.
Tinye aha njin ọchụchọ ma ọ bụ saịtị ịchọrọ ịchọọ, isiokwu iji mara ọdịiche dị na ya, yana URL engine yana% s dị ka okwu ọchụchọ. Nke a bụ ihe atụ na ChaCha:
Ugbu a, enwere m ike pịnye “ChaCha” na ajụjụ m na Chrome ga-agbanwe URL ahụ ozugbo wee zipu ya. Nke a dị mfe karịa ịpị otu ndọpụta na ịhọrọ njin nchọta. M nwere nke ọ bụla nke m Search maqbx chekwebe isiokwu… Google, Bing, Yahoo, ChaCha, Blog… na dị nnọọ eji omnibar ngwa ngwa na-arụpụta! Ozugbo ịmalite pịnye ihe, Chrome na-emezue ma na-enye ozi ọchụchọ ahụ:
I nwedịrị ike imelite omumu Twitter gi site na iji omnibar ebe ọ bụ na Twitter nwere usoro querystring nke na-eme ka Tweet. Ma ọ bụ ịnwere ike ịgbakwunye ụzọ mkpirisi isiokwu iji chọọ twitter na http://search.twitter.com/search?q=%s.
ngosi: ChaCha bụ onye ahịa m. Ha enwetala nsonaazụ dị ịtụnanya, agbanyeghị… ọkachasị mgbe ị na-achọ ihe dị mfe dịka adreesị, akara ekwentị, ajụjụ na-enweghị isi, ma ọ bụ ọbụlakwa njakịrị better. Ha nwere otutu akwukwo siri ike banyere ndi ama ama na isiokwu.
Tags: nchọgharịchromeGoogle chrome